Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Egwu? Flight Air320 AXNUMX si Delhi na Kabul ọ bụ ụgbọ elu
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Air India A320 na -efe na Kabul maka Delhi
Ụgbọ elu Air India Flight 243 na Sọnde, jiri Airbus 320 rụọ ọrụ, nọ n'ụgbọ elu a tụrụ anya na ọ ga -esi Delhi, India, gaa Kabul isi obodo Afghanistan. Ka ụgbọ elu ndị otu Star Alliance a na -aga ma na -abịaru nso, ndị agha Taliban chụpụrụ Kabul.
“A na -ekwupụta na ikuku ikuku dị na Afghanistan emechiela, yabụ na ụgbọelu agaghị arụ ọrụ ebe ahụ. Ụgbọ elu anyị mere na Kabul enweghị ike ịga, "onye na -ekwuchitere Air India kwuru.
Ụnyaahụ, ụgbọ elu Air India Flight 243 si Delhi gaa Kabul n'elekere 8:50 nke ụtụtụ Oge India gbutụrụ ntakịrị oge mgbe ya na ndị njem 40 Afghan nọ na Airbus A320.
Ọ bụ ụgbọ elu 2 awa, nkeji 5 na agbata obi Afghanistan. Mgbe ha gafesịrị ókè na AI 243 na Ọgọstụ 15 na atụmanya ga -amalite, e nyere iwu ka ụgbọ elu Air India jide ma gbaa gburugburu na mita 16,000 maka nkeji iri itoolu ọzọ tupu e kwe ka ọ daa.
Mgbe ụfọdụ ọdịda nwere ike gbuo oge n'ihi nkwukọrịta ikuku adịghị mma na mbara ikuku Afghanistan.
Ka ndị India na -eme ememme ụbọchị nnwere onwe na Sọnde, Ọgọstụ 15, ndị Taliban bụ na -emepụta ọgba aghara na ụjọ n'iweghara Kabul, isi obodo Afghanistan.
Ụjọ jidere ndị Kabul n'ihi na akụkọ pụtara na ndị Taliban gbara obodo ahụ gburugburu n'ụbọchị ahụ. Gọọmentị Afghanistan na -agbapụ mba ahụ, obodo ahụ n'onwe ya nọkwa n'ọgba aghara.
Air India 243, a Star Alliance ụgbọ elu nke Air India na -arụ, na -ebu ndị ọrụ ụgbọ mmiri 6 na ndị njem 40 si Delhi gaa Kabul n'amaghị ma a ga -ahapụ ha ka ha rute ọbụlagodi mgbe ha rutere n'ọdụ ụgbọ elu Kabul. E nyere ụgbọelu ahụ iwu ka ọ gbaa gburugburu na mbara igwe na -enweghị ihe kpatara ya.
N'ime nkeji iri itoolu sochirinụ, Air India gbara gburugburu elu -igwe n'ogo dị mita 90. Ụgbọ elu Air India ejirila mmanụ ụgbọ elu gbapụ. Onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ nwere ahụmihe maara na enwere ike gbuo oge ọdịda n'ihi adịghị mma nkwukọrịta ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Kabul mgbe ụfọdụ.
Dị ka ụgbọ elu India, ụgbọ elu 2 ọzọ si mba ọzọ na -efegharị n'enweghị ikike ịdata. Na mgbakwunye na ndị Taliban weghaara obodo ahụ, ịkwọ ụgbọ elu n'elu Kabul bụ ntakịrị ihe ịma aka.
Ọdụ ụgbọ elu Kabul na -abụkarị "ndị ọrụ na -agwụ ike" ndị ọkwọ ụgbọ elu na -ekwu. N'ime oge a n'afọ, ịbanye n'ime obodo na -eweta ihe ịma aka ọzọ: ikuku na -adị ike ma na -agba.
Ụgbọelu Aditya Chopra duziri ụgbọelu ahụ nwere oche 160.
N'ikpeazụ, enyere ikike n'elekere 3:30 nke abalị ebe ụgbọelu ahụ ga -ada.
Agbanyeghị, ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri amaghị na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Kabul na -akawanye njọ. Ọbụna mgbe ụgbọ elu ahụ rutere, ọ nweghị onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ hapụrụ ọdụ ụgbọ elu, nke a na -ahụkarị na Kabul. Mgbe ọ nọrọ ihe dị ka otu awa na ọkara, ụgbọ elu Air India banyere ndị njem 129 wee gawa Delhi ọzọ.
Ụgbọ elu ahụ bu ndị ọrụ ụlọ ọrụ nnọchite anya India, ndị ọrụ gọọmentị Afghanistan, opekata mpe ndị omeiwu Afghanistan abụọ, yana onye ndụmọdụ dị elu maka onye isi ala mbụ Ashraf Ghani.
Otu onye njem kwuru na ya nwere ike ịhụ ndị mmadụ n'ọdụ ụgbọ elu Kabul na -enwe nkụda mmụọ na -achọ ịpụ.
Na Mọnde, Air India nwere ụgbọ elu emebere maka Kabul si Delhi na 8:50 ụtụtụ. Ebu ụzọ gbuo ya n'elekere 12:50 nke abalị ma kwụsịchaa mgbe emechiri ikuku ikuku na Afghanistan mgbe enyere NOTAM - Notice to Airmen, ọkwa gọọmentị nwere ozi gbasara ọrụ ụgbọ elu.
Ụfọdụ ndị njem nọ n'ụgbọelu ahụ kwuru na ha nwere ike "hụ ebe mgbagha dị n'ala," mana amabeghị ihe ọ bụ.
E nwere ndị agha na -agbagharị n'okporo ụzọ awara awara. Enwekwara mkpọtụ nke ọrụ ikuku: ụgbọ elu ụgbọ elu ndị agha C-17 Globemaster na helikọpta Chinook na-efe na abata.
Ha hụkwara ụgbọelu ndị nkịtị nke Pakistan (PIA) na Qatar Airways ka adọwara na larịị.
Nke a bụ, ma eleghị anya, otu n'ime foto kacha nwute m hụtụrụla #Afghanistan. Ndị mmadụ na -achọsi ike ma gbahapụ. Enweghị ụlọ ọrụ enyemaka, enweghị UN, ọ nweghị gọọmentị. Ọ dịghị ihe. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR